5 Izinto Ezihlanganiswayo Zokuklanywa Kwe-imeyili Ezandisa Amanani Wokuchofoza | Martech Zone
5 Izinto Ezihlanganiswayo Zokuklanywa Kwe-imeyili Ezandisa Amanani Okuchofoza Ngokusebenzisa
NgoLwesibili, Okthoba 13, 2015 Douglas Karr
Angiqiniseki ukuthi kukhona okunye okukhungathekisayo kunokuhlela i-imeyili nokuqinisekisa ukuthi iyasebenza noma konke okuhlukile kuphathwa kuwo wonke amaklayenti e-imeyili. Imboni idinga ngempela ukuba nezinga lokusebenza kwe-imeyili njengoba nje ikwenzile ngeziphequluli. Uma uvula noma iyiphi i-imeyili edizayinwe kahle, ephendulayo ebukeka kahle kuzo zonke iziphequluli uzothola ukulandelana kwama-hacks we-hodgepodge ukuze kusebenze futhi kubukeke kahle ngangokunokwenzeka. Futhi lapho-ke uzoba nalowo obhalisile usebenzisa iklayenti elidala elinganikeli ukusekelwa. Ukufaka amakhodi nge-imeyili kuyiphupho elibi.
Kepha i-imeyili injalo ithuluzi elisebenzayo lokumaketha. Iqiniso lokuthi amathemba noma amakhasimende abhalisile, akumema ukuthi ubathumele imilayezo - ohlelweni lwakho - kunamandla amakhulu. I-imeyili iyaqhubeka nokubeka phezulu ohlwini lweziteshi zokumaketha ezisebenza kakhulu njengoba inesikhathi esingaphezu kweminyaka eyishumi. Ngokombiko ovela kuMailchimp:
Ama-73% wabakhangisi bayavuma ukuthi ukumaketha nge-imeyili kungumongo webhizinisi labo.
Ama-60% wabakhangisi bathi i-imeyili iyisisetshenziswa esibucayi semikhiqizo nezinsizakalo, kuqhathaniswa nabathengisi abangama-42% ngo-2014.
Ama-20% wabakhangisi bathi umthombo wemali oyinhloko webhizinisi labo uxhumene ngqo nokusebenza kwe-imeyili.
Ama-74% wabakhangisi bakholelwa ukuthi i-imeyili ikhiqiza noma izokhiqiza i-ROI ngokuzayo.
I-ROI engcono? Kungenzeka kanjani lokho? Yebo, ngaphandle kokwenza ubuwena nokuzenzakalela, kunethuba lokukhulisa ukuzibandakanya ngezinto ezisebenzisanayo ezishayela amazinga wokuchofoza okukhulu nokuqonda kuma-imeyili akho akhona. Izindela ze-imeyili zithanda ukucabanga nge-imeyili njenge-microsite exhumanayo, etholakala entendeni yesandla sakho ngedivayisi yakho yeselula. Banikeze izinto ezi-5 ezisebenzisanayo, ezisekelwayo ku-infographic yabo yakamuva Ukuzalwa kabusha kwe-imeyili: I-Microsite etholakalayo yigama elisha.
Amamenyu - Ubuwazi ukuthi ungafihla futhi ubonise amamenyu usebenzisa i-CSS ku-imeyili? Chofoza lapha amasampula.
Ama-Accordian - Usebenzisa i-CSS efanayo yokufihla nokukhombisa amamenyu, ungaphinda ufihle futhi ubonise okuqukethwe, ubeke izihloko zezindaba zakho ngaphezulu kuselula. Chofoza lapha amasampula.
Scratch neFlip - I-Apple Mail neThunderbird zisekela ukusebenzisana ekuzulazuleni, okunikeza ithuba lokubonisa ngokuqhubekayo okuqukethwe ku-imeyili yakho. Chofoza lapha amasampula.
I-GIF ephathekayo - Ngokwe-Email Institute, ama-Animated #GIF #emails akhuphula izinga lokuchofoza aze afike ku-26% futhi angakhuphula amazinga okuguqulwa ngo-103%! Chofoza lapha amasampula.
#Amavidiyo manje asesekelwa ngaphezulu kwama-50% wamakhasimende we-imeyili futhi angakhuphula i-ROI aze afike ku-280% kunama-imeyili wendabuko. Chofoza lapha amasampula.
Chofoza ku-infographic ukuthola inguqulo exhumanayo!
Tags: gif animatedi-animated gif imeyiliIkhodiimeyiliinkositini ye-imeyiliimenyu yekhodiyamu ye-imeyilii-imeyili animated gifizakhi ze-imeyiliamamenyu we-imeyilii-imeyili bhala futhi flipi-imeyili ekuqaleni flipizakhi ze-imeyili ezisebenzisanayoi-imeyili ephendulayobhala futhi uphenye
Kuyini ukumaketha okubikezelayo?
Izindlela Ezi-7 Zokuqinisekisa Iwebhusayithi Yesikhungo Samakhasimende